Ntuziaka CopyCat: Chiiz nke Velveeta Chiiz - Ndụmọdụ Na Nnukwu Echiche!
ihe ị ga-eji shredded hash browns mee
-esi mee ka rhubarb achịcha na friji rhubarb
jiri nwayọ na-eji esi nri na-eri nri na-ere penis
Ntuziaka Copycat: Chiiz nke Velveeta Chiiz
Mpempe akwụkwọ Vlixeta Ntụziaka !! Velveeta dị oke ọnụ na ụlọ ahịa ahụ. Zọpụta ego ma jiri aka gị mee ụlọ Velveeta n'ụlọ! Agaghị m azụta ahịa ahịa ọzọ!
Mmmm… Velveeta Chiiz! M hụrụ ya n'anya, karịsịa mere ka a na-ekpo ọkụ itinye!
Di m jụrụ m, 'Gịnị kpatara ị ga - achọ iji aka gị mee Vlixeta Chiiz?'. M nwere ike na-eche nke a dum ndepụta nke ihe mere ka m nwee Velveeta Chiiz….
Velveeta dị oke ọnụ
Ọ dị oke yummy
Ọ dị oke mfe ịme
Ntụziaka a nwere naanị 4 dị mfe, ihe niile m ghọtara
Ọ bụghị ụlọ ahịa ọ bụla na-ebu Velveeta
N'ihi na m nwere ike
Nke a oyiri Ntụziaka maka Velveeta Chiiz dị mfe ime ma na-atọ ụtọ dị egwu! You nwere ike iji ya na otu usoro ị na-eji echekwa ụlọ ahịa zụtara cheese, ọ na-arụ ọrụ zuru oke! Naanị kpochapu ihe na-eme gị (M ji nke m Ime Anwansi ime nke a), tinye ihe ole na ole dị mfe ma ị dị njikere ịga!
Maka “ogbe achịcha” m jiri igbe efu na kuki ndị akụ. Naanị m na-egbutu ya na ọkara wee jiri ihe mkpuchi plastik mee ya .. ọ bụ nha zuru oke!
* Ihe mkpuchi plastik * cheese cheese * blender *
4.5site na4votu NyochaNtụziaka
Detuo Ntuziaka Nri: Arụrụ n'ụlọ Velveeta Chiiz
Oge Nkwadebe5 Nkeji 8 awa Oge zuru ezu10 Nkeji Ọrụ12 Onye edemedeHolly Nilsson Ntụziaka copycat a maka Velveeta Chiiz dị mfe ịme ma masị ya! You nwere ike iji ya na otu usoro ị na-eji echekwa ụlọ ahịa zụtara cheese, ọ na-arụ ọrụ zuru oke! Naanị kpochapu ihe na-eme gị (M n'ezie ji m Bullet Magic iji mee nke a), tinye ihe ole na ole dị mfe ma ị dị njikere ịga! Bipute Ntụtụ
▢1 iko esi mmiri
▢6 tablespoons mmiri ara ehi ntụ ntụ
▢1 paụnd cheese cheddar grated
▢1 ½ teaspoons gelatin
Kwadebe 'igbe ogbe achịcha' site na idochi obere igbe nwere ihe mkpuchi plastik
Ikpokọta ½ iko esi mmiri, 3 tablespoons nke mmiri ara ehi ntụ ntụ na ¾ teaspoon nke gelatin ke blender
Gwakọta 5 sekọnd
Tinye cheese nke shredded cheese na ngwakọta ruo mgbe ezigbo (banyere 3 nkeji)
Wunye n'ime 'igbe ogbe achịcha' gị
Tinyegharịa ihe ndị fọdụrụ ma wụsa n'elu akwa mbụ
Kpuchie ma kpoo oku n'abali tupu icha
Calorisị:Ogbe 172,Carbohydrates:1g,Protein:10g,Abụba:13g,Abụba Ajuju:8g,Cholesterol:43mg,Sodium:Ogbe 250mg,Potassium:Ogbe 86mg,Sugar:1g,Vitamin A:Ogbe 415IU,Vitamin C:Ugboromg,Calcium:Oji 307mg,Iron:Ugboromg
IsiokwuDetuo Chiiz Velvetta N'ezieAgụụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
* DIY Taco Sizing Mix * Arụrụ Aka Ngwakọta ulo * DIY Onion Onya Mix *
Nke a Velveeta Chiiz uzommeputa si na Ebe a .